Gaming Headset ကို အကောင်းဆုံးပဲလိုချင်သူတွေအတွက်!!! ~ The ICT.com.mm Blog
Gaming Headset ကို အကောင်းဆုံးပဲလိုချင်သူတွေအတွက်!!!
Gaming Devices ဆရာကြီး SteelSeries ရဲ့ Arctis Pro + GameDAC က Gaming အတွက် ပထမဆုံးသော အရည်အသွေးအာမခံချက်အပြည့်နဲ့ Hi-Res Audio System ကို ပေးစွမ်းမယ့် World Class Gaming Headset ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Down-sampling လုံးဝမပါဘဲ လုံးဝစစ်မှန်တဲ့ Full Resolution Audio ကြောင့် Gaming Sound တွေကို ကြည်လင်ပီသတဲ့ 96 kHz/24 bit အသံကွာလတီနဲ့ နားဆင်ရစေမှာပါ။
ဒီ Arctis Pro + GameDAC Gaming Audio System မှာဆိုရင် အသံပိုင်းကို ကောင်းသထက်ကောင်းစေမယ့် Legendary ESS Sabre DAC နဲ့ amp တို့ပါဝင်တဲ့အပြင် ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Polished Steel နဲ့ Aluminium Alloy တို့လိုမျိုး Luxury Materials တွေကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် အကြမ်းခံမှုနဲ့ သပ်ရပ်မှုမှာလည်း အံ့မခန်းပါပဲ။
ဒါ့အပြင် Arctis Ski Goggle Headband နဲ့ Airwave Performance Fabric Ear Cushions တွေပါဝင်တာကြောင့် အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုပေမယ့်လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိနေစေမှာပါ။ Arctis Pro Headset မှာ Studio-quality နဲ့ Clearcast Microphone ကို ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ပြောသမျှအသံဟာ နောက်ခံဆူညံသံတွေမပါဘဲ ကြည်လင်ရှင်းလင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Xbox အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာမဟုတ်ပေမယ့်လည်း 3.5mm wire ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Xbox controller မှာချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် Xbox Players တွေအတွက်လည်း လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်နော်။
Shop here » https://www.ict.com.mm/…/steelseries-arctis-pro-game…
» 1% Cashback for CASH paying order
Newer ဝယ်ရခက်တဲ့ PS5 Digital Edition နဲ့ Disc Edition အိုင်စီတီမှာရပြီ
Older REMAX Oscillating Portable Fan တွေရှိတယ်